१० बोटबिरुवा र रूखहरू जुन भारतमा आध्यात्मिक महत्त्व राख्दछ - PAMPEREDPEOPLENY.COM - योग-आध्यात्मिकता
१० बोटबिरुवा र रूखहरू जुन भारतमा आध्यात्मिक महत्व राख्छ
टेक्नोलोजी आईक्यूओ,, आईक्यूओ Le किंवदंती भारत गल्तीले कन्फर्मेटेड अपेक्षित सुविधाहरू सुरूवात गर्दछ
चलचित्रहरू विष्णु विशाल र ज्वाला गुट्टा अप्रिल २२ मा गाँठो बाँध्न, जोडी एक पंजीकृत विवाह गर्न
खेलकुद आईपीएल २०२१: रोहित शर्मा कम शरीरका लागि रखरखाव कार्यमा आवश्यक छ, ह्यामस्ट्रिंग
समाचार तेह्र साईटहरूले गत २ 24 घण्टामा कुनै पनि COVID-19 मृत्युको रिपोर्ट गरेका छैनन्
घर योग आध्यात्मिकता विश्वास रहस्यवाद विश्वास रहस्यवाद oi-Prerna Aditi द्वारा प्रेरणा अदिति नोभेम्बर १,, २०१ 2019 मा
कसरी कड्डू की सब्जी बनाउने
हिन्दू संस्कृतिमा, विभिन्न बोटबिरुवा र रूखहरूलाई शुभ मानिन्छ र हामी ती रूखहरूलाई प्रार्थना गर्दछौं। मानिसहरूले पनि ती रूखहरू उनीहरूको घरको छेउमा रोप्दछन् र खालमा नराम्रो र नकारात्मक कम्पनहरू राख्न। त्यस कारणले गर्दा यी रूखहरूको ठूलो धार्मिक महत्त्व छ। यदि तपाईंले हिन्दू पवित्र पुस्तकहरूको पृष्ठहरू पल्टाउनुभयो भने तपाईंले पाउनुहुनेछ कि त्यहाँ थुप्रै रूखहरू छन् जसलाई दिव्य रूखहरू भनेर सम्बोधन गरिएको छ।
यस आधुनिक युगमा पनि मानिसहरु लाई ती रूखहरुमा विश्वास छ। त्यसोभए हामीलाई ती रूखहरू र बोटबिरुवाहरू र कसरी यी रूखहरूबाट लाभ उठाउन सकिन्छ भनेर जान्नुहोस्।
यो पनि पढ्नुहोस्: किन भारतीयहरू एल्डरहरूको खुट्टा छुन्छन्? कारण र महत्व जान्नुहोस्
१. पीपल ट्री
हिन्दू परम्परा अनुसार पीपल रूखलाई सबैभन्दा पवित्र र दिव्य रूखहरू मध्ये एक मानिन्छ। यो रूखलाई भगवान हनुमान र शनिदेवको मन्दिरको वरिपरि भेट्न सकिन्छ। यस्तो विश्वास गरिन्छ कि शनिबार यस रूखको पूजा गर्दा राम्रो भाग्य पाइन्छ। त्यस कारणले, देवी लक्ष्मी रूखमा बसोबास गर्छन्, विशेष गरी शनिबार।
बौद्ध धर्ममा पनि लोग पीपलको रूखको पूजा गर्छन् र यसलाई बोधि रूख भनेर सम्बोधन गर्छन् किनभने भगवान बुद्धले यस रूख मुनि उनको ज्ञान प्राप्त गरे।
भक्तहरू विश्वास गर्दछन् कि यस रूखमा रातो कपडा बाँधेर निस्सन्तान जोडीलाई बच्चाले आशिष् दिन सक्छ। साथै, जसलाई 'शनि दोष' छन् तिलको तेल प्रयोग गरेर दीया (बत्ती) जलाएर फाइदा लिन सकिन्छ।
२. तुलसी प्लान्ट
लगभग सबै हिन्दू घरहरुमा पवित्र तुलसी बोट छ। यो सबै धार्मिक कामहरुमा प्रयोग गरीन्छ। यो नकारात्मक उर्जा टाढा राख्न सक्षम छ भनिन्छ। सबै अवसरमा मानिसहरूले तुलसीको पूजा गर्छन्। यो आँगन मा तुलसी बिरुवा बढन एक राम्रो शगुन मानिन्छ। भक्तहरू विश्वास गर्दछन् कि तुलसीको बोटले बनेको तारले मानसिक शान्ति प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
यो मात्र होइन, तर बोटले केहि औषधीय फाइदाहरू पनि छ, जस्तै यसको पातहरू खाली पेट चबानेर स्वस्थ पाचन प्रणालीमा मद्दत गर्दछ। यसले विभिन्न चोटपटक र छाला सम्बन्धी रोगहरू पनि निको पार्न सक्छ।
B. बरगदको रूख
त्यहाँ धेरै धर्मशास्त्र र धार्मिक विश्वास छ कि हिन्दू धर्म मा बरगद रूखको महत्व बताउँछ। भक्तहरू विश्वास गर्छन् कि यसले त्रिमूर्ति अर्थात् भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा र भगवान शिवको प्रतीक हो। यो पनि दीर्घायु र शक्ति प्रतीक। यस रूखको पूजाले मानिसलाई लामो र स्वस्थ जीवनको लागि आशीर्वाद दिन सक्छ।
रूखको पूजा धेरै अवसरहरूमा गरिन्छ। महिलाले आफ्ना पति र बच्चाहरूको लामो र स्वस्थ जीवनको लागि यस रूखको पूजा गर्दछन्। जो बच्चाले गर्भधारण गर्न असमर्थ छन् उनीहरूले यस रूखलाई भगवान दक्षिणमुर्तीको रूपमा पूजा गर्न सक्छन्, जो यस रूखमा बस्ने छ, जसले सन्तानहीन जोडीलाई बच्चाको साथ आशीर्वाद दिन्छ।
Ban. केराको रूख
विज्ञानको अनुसार, केरा एक रूख होइन, मान्छेले यसको रूख र आकारका कारण रूखको रूपमा लिन्छन्। यो हिन्दू संस्कृतिमा सबैभन्दा उपयोगी र शुभ रूख मानिन्छ। यस रूखको प्रत्येक भाग अन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग गरीन्छ।
यो भगवान विष्णु को प्रतीक पनि छ र अक्सर पूजा गरिन्छ। मानिसहरु आफ्नो ट्रंक को उपयोग र स्वागत गेटहरु को सजावट को लागी। पातहरू भगवानको लागि प्लेटहरू प्रस्तावको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। साथै, व्यक्ति यसलाई धेरै अवसरहरूमा प्लेट खानेको रूपमा प्रयोग गर्छन्।
यस्तो विश्वास गरिन्छ कि यस रूखको फूल, धूपको लौरो, हल्दी, मोली, कुमकुम र गंगाजल (गंगा नदीको पवित्र पानी) ले पूजा गर्दा वैवाहिक आनंदले मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिन्छ। साथै, केराको रूख रोपेर र फल फलाउँदासम्म यसलाई पालन गरेर बच्चा नजन्माउने दम्पतीहरूलाई आशीर्वाद दिन सक्छ। जसले विवाह गर्न समस्या भइरहेको छ उसले आशीर्वाद लिन यो रूखको पूजा गर्न सक्दछ।
कमल देवी लक्ष्मी, सरस्वती र भगवान ब्रह्मा सहित धेरै भगवान को मनपर्ने फूल मानिन्छ। यो शुद्धता, सौन्दर्य, तपस्या र दिव्यता को प्रतीक हो। यद्यपि यो माटो र दलदलका क्षेत्रहरूमा फूल्दछ, तर यो सफा र फोहोरले छोडिन्छ। कमलको फूल पनि भगवानको प्रकटनको रूपमा देखिन्छ।
फूलले भाग्य, धन, समृद्धि र सौन्दर्यको देवी लक्ष्मीलाई पनि जनाउँदछ। कमलको फूल चढाएमा श्रद्धालुहरु लाई राम्रो भाग्य र आध्यात्मिक ज्ञान हुन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: नोभेम्बरको महिनामा भारतीय चाडपर्वहरूको सूची
सामन्था रुथ प्रभु बिकिनीमा अन्जान
Ba. बेल ट्री
बेल रूख एकदमै शुभ छ र यसको पातहरू भगवान शिवको पूजा गर्न प्रयोग गरिन्छ। यस रूखका ट्रिफोलिएट पातहरू विभिन्न अवसरहरूमा भगवान शिवलाई प्रसन्न पार्न प्रयोग गरिन्छ। दन्त्यकथामा यो छ कि ती तीन पर्चामा भगवान शिवको तीन आँखाको प्रतीक रहेको छ। यो पनि विश्वास गरिन्छ कि पातहरूले भगवान ब्रह्मा, विष्णु र शिव र उनीहरूको शक्ति अर्थात क्रमशः सृष्टि, संरक्षण र विनाशलाई बुझाउँछन्।
यसका अतिरिक्त रूखमा केहि औषधीय गुणहरू पनि छन् र यसको फलहरू स्वस्थ पनि छन्।
Sha. शमी रूख
हिन्दू संस्कृति अनुसार शमी रूख पनि एक शुभ बृक्ष हो। भनिन्छ कि न्यायका परमेश्वर भगवान् शनिबाट आशीर्वाद लिनको लागि मानिसहरूले यसको लागि मार्गहरू खोज्छन्। उहाँ एक हुनुहुन्छ जसले मानिसहरूलाई तिनीहरूको काम अनुसार पुरस्कार दिनुहुन्छ। भक्तहरूले जहिले पनि यस्ता कुराहरूबाट जोगिन कोशिश गर्छन् जसले भगवान्‌लाई क्रोधित पार्छन्।
यसका लागि उनीहरूले शमीको रूख उनीहरूको घरहरू वा आँगनमा पनि रोप्दछन्। भनिन्छ कि बिहान शमी रूखको पूजा गर्दा, विशेष गरी शनिबारका दिन मानिसहरूमा भाग्य पाइन्छ। साथै, यस तरिकाले शनिदेव प्रसन्न हुनेछन् र तिनीहरूलाई दुष्टबाट बचाउनुहुनेछ।
Sand. चन्दनको रूख
हिन्दू संस्कृतिको पवित्र शास्त्रहरूमा चन्दनको रूखहरूको महत्त्व र महत्त्व उल्लेख गरिएको छ। पूजाको बेला चन्दनको रूखबाट पेस्ट र तेल निकाल्ने काम अक्सर परमेश्वरलाई चढाइन्छ। शुद्धता सुनिश्चित गर्न, व्यक्तिहरू शुभ क्षणहरूमा चन्दनको प्रयोग गर्छन्। यसमा चन्दनको पेस्टको साथ पात पातहरू चढाएमा भगवान शिव र देवी पार्वतीलाई प्रसन्न तुल्याउन सकिन्छ। यो विश्वास गरिन्छ कि एक जनाले जो सुगन्ध प्रदान गर्दछ, यहाँसम्म कि कुहुरलाई पनि, जसले यसलाई काट्छ।
घरमा कपालको विकासको लागि सुझावहरू
बाँस फेरि रूख होइन तर यस देशमा धेरै राम्रो मानिन्छ। अक्सर पूजा र अन्य अवसरहरूमा मानिसहरू भगवानलाई खुशी पार्न र यसमा बनेका बाँसको हाँगा र टोकरीहरू प्रयोग गर्छन्। भगवान श्रीकृष्णको बाँसुरी (बाँसुरी) पनि बाँसबाट बनेको छ त्यसैले भक्तहरूले यसलाई एकदमै शुभ मान्दछन्।
१०. अशोक रूख
एक सजिलैसँग विभिन्न घर वरिपरिका अशोक रूखहरू फेला पार्न सकिन्छ। यस रूखको नामको अर्थ हो, जसलाई कुनै शोक छैन। रूख एकदम ठाडो, सदाबहार, यति लामो छैन र हरियो पातहरू छन्। रूखले उर्वरता, समृद्धि, खुशी र प्रेमलाई जनाउँछ।
भक्तहरू विश्वास गर्छन् कि यो रूख प्रेमको परमेश्वर, भगवान कामदेवलाई समर्पित छ। यस रूखका फूलहरू चहकिलो पहेंलो रंगका छन्, अद्वितीय सुगन्ध छ र विभिन्न अवसरहरूमा सजावटको लागि प्रयोग गरिन्छ।
यस्तो विश्वास गरिन्छ कि यी रूखहरू आँगनमा वा घरको अगाडि रहेकोले त्यस घरमा बस्ने परिवारका सदस्यहरूबीच सद्भाव, शान्ति र आनन्द ल्याउन सक्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: यहाँ यो कारण छ किन युधिष्ठिरले आफ्नो कुकुरको लागि स्वर्ग अस्वीकार गरे
रूखहरू र बोटबिरुवाहरू मानव अस्तित्वका लागि एकदम आवश्यक छन् किनकि तिनीहरूले हावालाई शुद्धिकरण गर्दछन् र वर्षाको प्रमुख कारणहरू हुन्। धार्मिक मोर्चामा रूखहरू विभिन्न देवीदेवताहरूको प्रदर्शनभन्दा कम हुँदैनन्। यी रूखहरूको पूजाले वास्तवमा मानिसहरूलाई विभिन्न समस्याहरूबाट सुरक्षित रहन मद्दत गर्दछ।
कसरी कपालको लागि गुलाबजल प्रयोग गर्ने
शुद देसी रोमान्समा वाणी कपूर
छाला गति को समयमा के खानुहुन्छ
कसरी करवा चौथ छिटो गर्ने
कसरी डन्ड्रफको लागि दही प्रयोग गर्ने